Jaal Jaarraa Duuti Nusaamtuus Yaadni Isaa Abadiif Nu Waliin Jiraata -
Abbootii teenya; Ilmaan keenya;
Hundi keeysanuu baga nagayaan dhuftan. Assalaamu Aleykum
Guyyaa ar’aa wanni asitti walitti nu fide, du’a jaala keenya, wahila keenya, obboleeysakeenya Jaarraa
Aniis wanniniin godhu, bu’aa bahii jaal Jaarraan keeysa dabre gabaabsee isinii wajjin qooddachuudha.
Jaal Jaarraan seenaa boonsituu dheertuu qaba. Namni tokko yeroo gabaabduu tanakeeysatti irraa dubbatee fixuu hindendayu. Kanaafuu, bakka garii kan tuqamuu qabdu qofaan isiniif keeysa baha. Bakki gaggabaaduun tuni gariin yaadannoo inni harka isaatiin barreeyse yoo taatu, gariin ammoo taniin ifiif qaamaan keeysa turetahuudhaan isiniif mirkaneeysa. Barruu yaadanno tani jaal Jaarraan harka isaatiin barreeyse keeysatti akkana ja’a:
“Ani abbaa Kiyya, Haaji Ibraam Haamid fii haadha tiyya aaddee MoominaEybootirraa, Konnyaa Gaara Mullataa, baddaa Kufaa Callee, naannooWatar, araddaa waldaya Raammis, ganda Mudiir Gooroo-ttin bara 1939 tti dhaladhe. Eega Amaarri Calanqotti Oromoo cabsee, Nafxanyoota bakka bakka qubachiisee, sirna Malkanyaa hujirra oolchuuf taffaaffi jalqabe, akaakoon kiyya Hamid Ibroo Shaxaa warra lola Calanqoorraa lolchisiisummaan qooda fudhatee fi Oromo Harar biratti akkaandhagayama qabu turee, sirna Amaaraa irratti finciluudhaani beekkama.Akaakoon kiyya nama capha calanqoo booda diddaa sirnaMalknayaarratti soossooha kaase ture. Sossooha san milkeeysuuf Jabuutidhaqee Afar qunnamee, biyya keeysattiis matoota Afarii fi matoolii Oromoo Carcar, Alii Gurraa faa qunnamee mariihatee ture. Bifa kanaan Shaggar dhaqee Oromoo achiitiis qunnamuuf osoo
gootota Oromoo kanneen biraatiin marihachaa jiruu diinni irratti dhaqqabe. Kana duuba; Raas Makonnun Qullubbitti haala biyya marihachuuf yaada ja’uun ifitti yaamee achitti nyaata keeysatti summii nyaachise. Akkasitti gaa, matootiin Oromoo kanneen isaa waliin turan
fuudhanii osoo yaa’anuu lubbuun karatti keeysaa baatee Maayaa Guddotti awwaalame.“
Jaal Jaarraan seenaa akkanaa tan dhumii hinqabne dhagayaati guddate. LolaCalanqotti tahe, gaafa san shira dalagame, illima diini Oromoof lafa kaaye tan lakkooysa hinqabne arkee, baree daran beekkoomsaan if cimsaa dhufe. Loala san milkeeyfachuuf diinni Oromoo addaan qoodee kaan kaanirratti duulchisee Oromooakka cabse hubatee ture. Capha Calanqoo booda maalummaa sirna malkanyaa,zulmifii eeqqoo fokkoftuu bineensummaa sirna sanii warra isa dura turerraabaratchaa
dhufee, itti ababee guddate. Sirni malkanyaa sirna ilmi nama akka beeyladaatti gadaantummaan keeysa jiraatuu ture. Sirna malkanyaa keeysatti, namni Oromoo, jaarsaafii jaartiin ilmoo ifii manatti dhiisanii, jaarsi geeshee ciree, hidhee, baadhatee,farshoon mana nafxanyaatirraa akka hin hanqanne mirkaneeysa. Niitiin Oromooammoo midhaan tumtee, kurkitee, qooshaa daaktee duuydarratti baadhattee amna dheeraa biyyaa-biyya deemtee maatii malkanyaa tajaajiluun hiree jireenya Oromoo tahee ture. Geejjiba malkanyichaa tiysanii, okaya nyaachisanii gabbisuuniifii faltii jalaaqulqulleeysuun dirqama Oromooti. Dibootaafii tumaaleyyii gabbisanii malkanyootaangabbaruun dirqama gaafasiiti. Badii xixiqqoof jecha Oromoon mooraa geengeefirinciltuu keeysatti hidhamee dhiitamaa bulee namni du’e lakkaawamee hin dhumu. Sirna akkanaa keeysetti Oromoon gabrummaaf ramadamee nafxanyoonni sadoo fii badhaadhinaan jiraachuun, Oromoon akkuma beeyladaa biraatti qabeenya Malkanyaaturuu gaafa
hubaterraa jalqabee, Jaarraan sirna gadigalummaa kana fonqolchuun hojii dhalootahaaraya gaafa sanii tahuu warra if amansiisan keeysaa tokkofii kan hangafaa ture.
Gaafa Xaaliyaan Nafxanyoonni naannoo Hararii fi Gaara Mullataa keeysa turan, irrahedduun bakka itti shaffatan nannoo inni itti dhalate, naannoo tarsimoo qabdu, naannoo Raammisi ture. Nafxanyoonni Xaaliyaanirratti shaffatan kuni qawweehidhatanii waani tureef, Oromoo meeshaa lolaa hinqabne tan naannoo Raamis qubaturratti miidhaa gurguddaa fidanii turan. Nafxanyoonni kuni Oromoo akka qabeenya ifiitti waani laalaniif kani Xaaliyaan mootummaarraa fonqolchee ifiifuu dheefarra jirani qawweefii uleedhaan Oromoo aloolaa turan. Qabeenya Oromoo saamuun, beeyladaa Oromoo akka ifiif fedhanitti yeroo jaalatanitti qalataniinyaachuun, dubartii Oromoo reebuun, dargaggeeyyii Oromoo akka geejjibattife’achuun Oromotti jireenya hadheeysee ture. Jaal Jaarraan zulmii Shiftoonni Nafxanyaa naannoo sanitti hojjatan takka-takkaani dhagayaa guddate. Beekkomsaakkanaa kan xalayaarraa dubbise osoo hin tahin, kan Oromoo imimmaan dhangalaasaahimaturraa barate waliini barnootaaf magaalaa Harar dhaqe. Hararitti naannoo manaheera, manneen hidhaatiifii lafa bulchiinsaa hunda keeysaas
wanni jiraa sirna guntummaa Habashaa tahuu akaakkate. Gabrummaan iddoonfamtee bakki irraa taligamtu magaalaa akka Harar faa tahuun ifatti galeef. Cunqursaan, saaminsi, ajjeechaan, hidhaan, sadafa qawweetiin halkanii guyyaatumamuun, beekaa fii aalimni Oromo slphifamuun, arrabaafii araraafamni hundi bakki jiddugalummaadhaan irraa burqu inumaa magaaloota akka Hararfaa tahuudha barate. Magaalaa tanaan olittillee sirni malkanya Shaggarirraa waltajjii kan qabu tahuudhaafii sirni gabrummaa akkanaa kuniis guntummaa sirna Habashaa kan biyyaOromoorra bargaafate tahuu addeeyfachuun achirraahi. Hararitti gochagabroomfaatootaa kani duraan manguddorraa dhagayuu ture takka-takkaanfakkattuulee isanii wajjiin ijaan arkuf hiree arkate. Siyaasaa sirna (systematically) saaminsaa, cunqursaa fi hacuuccaa tani mootummaan Habashaa jiddugalabiyyattiirraa gaggeysituus achirraa barate. Miidhaafii ararafamni hundi kan Raamis qofaaf hiree tahe osoo hin tahin, inumaa kan magaalaa harar qofallee osii hin tahin kan lafa Oromoo hundaa akka tahe achirraa gadi hiikkate. Duraanillee waandarashaan ja’u dhaggeeyfachaatuma ture. Achiin booda waani darashaan ja’u, wanni manguddoon ittiin gumgumtu hundi qaamaa qalbiidhaan galeef. Tanneen jiruu isaaguutuu isa keeysaa hinhaqamin tan akka asiin gadiiti:
Previous Highlights of the 2013 OSA Midyear Conference
Next Hadhaa Qabsoon qabdu dhamdhamuu dadhabuudhaan, qabsoo keessaa of moggeessuun amaluma qabsoo ti.